4dị ọdịnaya B2B kachasị arụ ọrụ? | Martech Zone
Ihe a rụpụtara juru anyị anya Nkwupụta ahịa ahịa ọdịnaya 2015. Anyị na-na na gbanwere fọrọ nke nta niile anyị na-elekwasị anya n'ihi na-amụba ahịa òkè, ika mmata na akakabarede njikarịcha na ikike ọdịnaya na anyị na-emepe emepe maka ndị ahịa anyị. Na Atsdị Ọdịnaya dị elu maka B2B Marketing bụ:
ikpe Studies - E wezụga ịkwalite akara gị, ọmụmụ ihe gbasara ikpe na-enye ụzọ dị irè isi kọọ akụkọ banyere onye ahịa nke ga-edebanye aha ya na atụmanya ndị ọzọ na ụlọ ọrụ yiri ya ma ọ bụ chee ihe ịma aka yiri ya ihu. Usoro ọmụmụ na-enye akụkụ ọ bụla nke nnukwu ọdịnaya - gụnyere akụkọ ahụ, na-akwado data, ngwaahịa ma ọ bụ nnyocha ọrụ, nleba anya, yana oku iji mee ihe.
Videos - Vidio bara uru na okwu 1.8. Nke a bụ nkwuwa okwu siri ike sitere na ọmụmụ Forrester nke Dr. James McQuivey Etu vidiyo ga-esi weghara ụwa. Ike ịdebanye aha na mmegharị na anya ma n'otu oge na-akọwa site na ụda na-enyere aka ịkọwa ma kọwaa nke ọma karịa ederede ma ọ bụ ihe osise. Vidio abụghị maka ndị umengwụ ịgụ… ha bụ maka ndị chọrọ ijide ngwa ngwa ma ghọta ozi ndị ọzọ.
Akwụkwọ akụkọ - Ọ bụrụ na ebumnuche ndị ahịa anyị bụ ka ha na ndị na-ege ntị na-emekọrịta ihe, ha ga-enye aka ịkụziri ha ihe. Akwụkwọ edemede ọcha n'otu oge na-agwa ma na-akụziri onye na-agụ ya ihe ma na-edozi ụlọ ọrụ gị dị ka ikike na isiokwu ahụ. Bụ onye ikike na-ewulite ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na-akpata ntụgharị.
Infographics - Nke a bụ atụmatụ goto anyị maka ndị ahịa ọ bụla na - aga n'ihu ịkwụ ụgwọ ụgwọ ugboro ugboro. Dịka anyị na-ahụ onye ahịa ka ọ na-agba mbọ iwulite mmata na nyocha ọchụchọ, ọ nweghị atụmatụ arụ ọrụ karịa nke anyị mmemme infographic. Anyị na-ele ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ada ihu na ihu ha… naanị na-akụkọta ụfọdụ stats na ọmarịcha interface, mana mgbe ị na-akọ akụkọ ahụ, nakọtara nyocha ahụ, wee mepụta ihe ọmụma na-enyere aka duzie uche onye na-ekiri ya ma nyere ha aka ịkọwa esemokwu, e nweghị usoro ka mma. Infographics dị obere… ha dị mfe itinye ma kesaa ebe niile. Nke a bụ nwa anyị!
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ama jijiji nnupụisi na-efu nke ọdịnaya adịchaghị. Ọ bụ ya mere anyị ji enyere ha aka ịghaghachi atụmatụ n'etiti usoro ma nyekwa ndị ahịa anyị akụ. Otu infographic na-acha ọcha akwụkwọ ma ọ bụ ikpe ọmụmụ ike ga-eji ike broshuọ, ahịa n'ihu, web saịtị ndịna, blog posts, pọdkastị, webinars… na ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’ị naghị eweghachite ọdịnaya a, ị naghị amata ikike ya niile. Ma ọ bụrụ na ị naghị eji ha eme ihe ọ bụla, ị na-agbadata n'azụ ndị asọmpi gị na-eme.
The Ntụle ahịa ahịa ahịa ọdịnaya afọ 2015 na-enye nyocha ọgbara ọhụrụ nke usoro mgbasa ozi ọdịnaya kachasị na ụlọ ọrụ B2B, ma dabere na ọrụ nyocha naanị nke emere na mmekorita ya Circle Nnyocha na Mee / June 2015.
Nke a bụ ezigbo mkparịta ụka mmekọrịta na B2B Ahịa agbakọtawo ọnụ (ịnwere ike pịa bọtịnụ ihuenyo zuru oke iji meekọrịta ihe dị mfe):
Na nke a bụ ihe infographic na top B2B Content azum na ụfọdụ na-akwado data:
Tags: 2015ahịa b2bikpe ọmụmụnyocha gburugburuNkwupụta ahịa ahịa ọdịnayaflip akwụkwọtụgharịa ọdịnayaAma ihe ngosiInfographics Ahịanduruvideoswhitepapers